Ịkpọọ egwu na Spotify? Lee anya na nke a, ọ dịghị onye pụrụ igbochi gị ugbu a
Ị ga-kama akwụ obere ego na-ege ntị na ohere fọrọ nke nta niile music n'ụwa a? Ma ọ bụ ị na-ahọrọ iji kwụọ ụgwọ maka onye ọ bụla soro na ị chọrọ ige ntị? Music gụgharia ọrụ aghọwo a ụzọ nke na-azọpụta ego. Kama ịzụ otu music track maka $0.99, ọrụ nwere ike ịkwụ ụgwọ a obere ego iji nweta dị ka ọtụtụ music dị ka ha chọrọ. Ọ bụrụ na ịzụta otu track maka $0.99, 10 tracks ga-eri $9.99 nke bụ price ị na-akwụ na ọtụtụ music gụgharia ọrụ inweta ohere ka ọtụtụ nde songs.
Part1.How ka mmekọrịta Spotify music ka iPod
Part 2. Olee na-egwu Spotify music on iPod
Part3. Olee otú igwu egwu Spotify music on iOS
Part 4. Olee na-egwu Spotify music on Android
Part 5.Play Spotify on web
1.How ka mmekọrịta Spotify music ka iPod
Na-egwu Spotify music on iPod ịkpọgharịa, i kwesịrị ibudata music si Spotify na mgbe ahụ mmekọrịta ya na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ ị pụrụ nanị nyefee ebudatara songs ngwaọrụ gị iji Wondershare TunesGo. Ọbụna ma ọ bụrụ na usoro na-adịghị akwado, TunesGo nwere ike tọghata gị ebudatara music ka format na ngwaọrụ gị na-akwado.
Mgbe nbudata gị music si Spotify iji TunesGo, nanị mmekọrịta ya na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ nyefee ya na TunesGo na-egwu music na ngwaọrụ gị nkịtị ụzọ. The music ibudatara Spotify
Ka ibudata music si Spotify iji TunesGo, eso ndị a:
Download na wụnye TunesGo na www.wondershare.com/tunesgo/.
Mepee Spotify na-egwu music ịchọrọ ibudata.
Onyeisi-awụ ọsọ n'ugwu Go na Pịa na-edekọ emi odude ke aka ekpe n'akụkụ nke software.
Pịa na rec n'etiti TunesGo na ngwa ngwa-egwu music ịchọrọ ibudata site na Spotify.
Mgbe ị na-mere ndekọ, pịa na nkwụsị bọtịnụ na n'etiti TunesGo.
Azọpụta gị music site na ịpị checkbox nke track ị chọrọ ịzọpụta na pịa bupu ke n'elu.
Họrọ ọnọdụ na ị chọrọ ịzọpụta gị ebudatara Spotify music na pịa OK.
2. Olee otú igwu egwu Spotify music on iPod
Na-egwu Spotify music on iPod, nanị ibudata music na iji usoro kọwara n'elu na mgbe ahụ mmekọrịta na music ebudatara gị iPod ngwaọrụ ma ọ bụ nyefee music ebudatara ngwaọrụ gị na iji transfer atụmatụ dị n'ime TunesGo software.
I nwekwara ike ibudata Spotify music ngwa si Apple App Store na-ege ntị music na gị iPod na Spotify. Iji mara otú ibudata ngwa si égwu Store, na-ezo ka isiokwu n'okpuru maka nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro.
3.How na-egwu Spotify music on iOS
Spotify music ngwa dị maka download maka iOS ọrụ na Apple App Echekwala maka free. Ọ bụrụ na Spotify na-anaghị akwado na obodo gị, ị ga-anaghị ahụ App na gị mba App Store.
Abanye na na email gị ma ọ Facebook iji nweta music ma ọ bụ ndepụta ọkpụkpọ gị.
Họrọ ma ọ bụ chọọ maka music ị chọrọ ige ntị na-egwu ya.
3. Olee otú igwu egwu Spotify music on Android
Na-egwuri egwu Spotify music on Android yiri egwu na-akpọ Spotify on iOS.
1. Open Google Play Echekwala na ịchọ Spotify.
2. Kpatụ "Wụnye" iji wụnye Spotify gị Android ngwaọrụ.
3. Mgbe echichi zuru ezu, isi n'ụlọ gị na ihuenyo na enweta na Spotify ngwa na-emeghe ngwa.
4. abanye na na email gị ma ọ Facebook iji nweta music ma ọ bụ ndepụta ọkpụkpọ gị.
5. Họrọ ma ọ bụ chọọ maka music ị chọrọ ige ntị na-egwu ya.
4. Play Spotify on web
N'adịghị ka ụfọdụ nke ọzọ music gụgharia ọrụ, Spotify-enye ohere tent na-ege ntị music na weebụ anyị site ha nchọgharị weebụ na-enweghị nbudata ọ bụla software. Nke a na atụmatụ bụ karịsịa n'ihi na ọrụ ndị nwere mmasị na-ege egwú na Spotify ma achọghị ibudata ọ bụla software ma ọ bụ ngwa n'ihi na. Na-ege ntị music on Spotify iji ihe nchọgharị weebụ gị, na-eso nzọụkwụ ndị a
Mepee nchọgharị weebụ gị na-aga www.spotify.com.
Pịa na log na na n'elu nri akuku nke ibe weebụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu akaụntụ ugbua, banye maka otu akaụntụ. Ị nwere ike debanyere eji gị email ma ọ bụ iji Facebook. The Facebook mma bụ ndị kasị ụzọ edebanye. Ọ bụrụ na ị nwere otu akaụntụ ama, dị nnọọ tinye gị email na paswọọdụ na abanye na ma ọ bụ pịa log na na Facebook ma ọ bụrụ na ị na ịdenyere aha na-eji gị Facebook akaụntụ.
Họrọ ma ọ bụ chọọ maka music ị chọrọ ige ntị na pịa na play button. Nke ahụ bụ ya! Ị na-ege ntị gị music on Spotify web.
I nwere ike ọ gaghị enwe ike iji ụfọdụ njirimara dị ka customizing gị playlist, edezi play kwụ n'ahịrị na ụfọdụ ndị ọzọ ihe ma ọ bụrụ na ị bụ onye na free ọrụ. The adịchaghị ọrụ nwere ihe nhọrọ na adịchaghị ọrụ nwere ohere nza nke goodies karịa free ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-emeghe Spotify na ọ na-adịghị Ibu Ibu ma ọ bụ ọ dịghị egosi dị ka screenshot n'okpuru, ị ga-mkpa na na wụnye Adobe Flash Player. The Adobe Flash Player na-eme ka ihe na ihe nchọgharị gị anya jụụ na otú ha na-azọrọ na-adị.
> Resource> Music> Play Music on Spotify? Lee anya na Nke a,